दाँतको किरा मार्ने अचुक घरेलु उपाय, पढेर शेयर गरौं - Kavre Online
दूधेदाँतमा किरा लाग्न नदिन के गर्ने के नगर्ने ?
डा. श्वेता धिताल
बाल दन्तरोग विशेषज्ञ
बच्चाहरूको दाँत उम्रेदेखि नै सफा गरिदिनुपर्छ । धेरै साना नानीहरूको हकमा कपासलाई नुनपानीमा डुबाएर सफा गरिदिन सकिन्छ । जुन बेलादेखि बच्चाले जुत्ताको लेस आफैँ बाध्न सक्छ, त्यसपछि मात्रै राम्रोसँग ब्रस गर्न सक्छ भन्ने भनाइ पनि छ । त्यसैले राम्रोसँग दाँत सफा गर्न नसक्ने बच्चालाई भने आमाबुबाले सघाउनुपर्छ ।
किरा लाग्ने/नलाग्ने कुरामा दाँतको बनावटको भूमिका हुन्छ । कसैले जति चकलेट खाँदा पनि किरा लाग्दैन । कसैकोमा लागिहाल्छ । क्याल्सियमको कमी भएको दाँतमा बढी मात्रामा किरा लाग्छ । दाँतमा किरा लागेपछि पिप जम्छ । दुख्छ । गाला सुन्निन्छ । कसैको त २० वटा दाँतमा १५/१६ वटामा नै किरा लागेको हुन्छ । कसैको दाँतको भित्रसम्म किरा लाग्छ । जसको लागि जरादेखि नै उपचार गर्नुपर्छ । उपचार प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ । सुरुको दाँतमा किरा लाग्यो भने पछि आउने दाँतमा पनि असर पर्छ । बच्चाको दाँतको किरा अरू मान्छेमा सर्दैन । तर, उनीहरूको एक दाँतबाट अर्को दाँतमा भने सर्न सक्छ ।
4,474 Post Views
Prevजण्डिस छिटो निको पार्ने एक मात्र औषधी :पानी अमला
Nextकतै तपाईलाई पनि ग्याष्ट्रिकले सताईरहेको छ भने अब घरमै बसी बसी उपचार बिधी अपनाई अपनाउनुहोस केही दिनमै छुटकरा पाईने
दिवाली मनाउँदा अभिनेत्री शर्माको लेहेङ्गामा आगो सल्किएपछि… (तस्विर सहित्)